Koomishanka Xuquuqal Iinsaanka oo Hargeysa ku Qabtay kulan lagaga Hadlayay Tacadiga kufsiga iyo Xeerar la Xidhiidha. |
Koomishanka Xuquuqal Iinsaanka oo Hargeysa ku Qabtay kulan lagaga Hadlayay Tacadiga kufsiga iyo Xeerar la Xidhiidha.
Hargeisa(GNN):-Koomishanka xuquuqal iinsaanka Qaranka Somaliland, ayaa magaalad Hargeysa ku qabtay kulan lagu falanqaynayay tacadiyada iyo kufsiga loo geysto haweenka iyo xeerarka iyo shuruucda khuseeya arrimaha kufsiga.
Agaasimaha fulinta komishanka Xuquuqal Insaanka Qaranka Cabdisamad Sacad Xasan, ayaa sheegay si loo suuliyo arrimaha kufsiga in loo baahan yahay in tala Qaran laga yeesho.
Guddoomiyaha xuquuqal iinsaanka Qaranka Somaliland, Maxamed Baaruud Cali, ayaa tilmaamay in arrimaha kufsiga gobollada bariga Somaliland lagu xaliyo sidii dhaqanku ahaan jiray, iyada oo gabadha xaal marin looga dhigayo konton neef oo adhi ahi.
Guddoomiyaha koomishanka xuquuqal iinsaanka Somaliland, Maxamed Baarud Cali ayaa su’aal galiyay sida ninkii gabadha kufsaday marka loo dhiso ay guri ugu wada noolanayaan.“Kufsigu waa uu inagu soo noqnoqday, weliba sida aynu wada og nahay inta la soo sheego kufsigu aadbay uga yar tahay inta dhacda kufsiga.
Gobollada qaarkood oo ay u badan yihiin gobollada barrigu weli waxa taagan sidii dhaqanku ahaan jiray in lagu xaliyo konton adhi ah ayaa inantii la kufsaday la siinayaa, waxa taagan in la yidhaaho inantii ha loo guuriyo kii kufsaday, ninkii kufsaday sidee ayay guriga ula joogi kartaa?”
Agaasimaha fulinta komishanka Xuquuqal Insaanka Qaranka Cabdisamad Sacad Xasan, ayaa sheegay si loo suuliyo arrimaha kufsiga in loo baahan yahay in tala Qaran laga yeesho. “Sida aynu ognahay caqabado badan ayaa ka jira runtii arrimaha kufsiga, ama ha ahaadaan caqabado sharci ama kuwa dhaqan, ama qaar bulsheed, balse waxa aynu rabna inaga oo isku duuban arrintani in ay noqoto mid heer Qaran ah, oo meel looga soo wada jeesto sidii loo xalinlaha dhibaatooyinkaasi sidii loo helilahaa qawaanin ku fulin in la joojiyo ama uu yaraado tacadiga kufsigu”
Guddoomiye ku xigeenka xuquuqal iinsaanka Qaranka marwo Waris Abshir ayaa hoosta ka xariiqday in halista kufsiga ee dalka ka jirta loo baahan yahay in meel looga soo wada jeesto. “Waa walaashiin, waa gabadhiini, waa marwadaadii, marka mushkilada maanta taagan ayaynu doonayna in aynu dhan ka wada noqono”
Agaasimaha guud ee wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada Cabdirashiid Ibraahim Sheekh Cabdiraxmaan oo isna hadal kooban madasha ka jeediyay waxaa hadaladiisi ka mid ahaa. “Bulshada inta damiirka lihi ha kacdo, inay ka hadlaan oo arrintani noqoto mawduuc weyn, maanta in arrimaha siyaasadu bulshadeena dhexdeeda xoog ku yeeshaan oo dunubta dhacaya ee sida aflaanta loo matalaya ay dood adag iyo qaylo badan yeelan waayaan waxa ay muujinaysa bulshadeenu halka ay taagan tahay”